Rag ka Ganacsanayey Maandooriyaha Xashiishka Oo Gacanta Lagu Dhigay.(Sawiro) – Heemaal News Network
Ciidamada Booliska Jubbaland ayaa gacanta ku soo dhigay rag ka ganacsanayey maandooriyaha xashiishka loo yaqaano.
Raggan oo ka koobnaa labo nin ayaa laga soo qabtay xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo sida ay sheegeen saraakiisha booliska magaaladaas.
Waxaa sido kale lala soo qabtay raggan dhowr kg oo ka mid ah xasshiishka ay ka ganacsanayeen, waxaana lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo.
Saraakiisha booliska Jubbaland ayaa sheegay iney ku daba jiraan kooxo kale oo ka ganacsada xashiishka maandooriyaha, iyagoo xusay in labada nin ay sharciga horgeyn doonaan.
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dowladda Soomaaliya u qoray warqad cabasho ah oo ku aadan dhibaatooyin amniga iyo Siyaasadda halis ku ah oo ka socda degaanada Jubbaland, kuwaasoo uu ku eedeeyey iney waddaan xildhibaano ka tirsan […]
Ciidanka Nabad sugida maamulka Jubbaland ayaa maanta soo bandhigay qarax miino nuuca baabuurta hoosta looga dhajiyo oo la doonayay in lagu dilo sargaal katirsanaa ciidankaasi. Qaraxa ayaa la sheegay in hoosta looga xiray gaari yar […]
Jubbaland Oo si Adag Uga Jawaabtay Dalabkii Wasiir Beyle Ee Xisaab Celinta.
Wasiirka Maaliyadda Jubbaland C/rashiid Jire ayaa si kulul uga jawaabay qoraal uu soo saaray Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle, kaasoo Maamul goboleedyada looga codsanayo inay soo dhameystiraan xisaab celinta lacagihii horay loogu diray […]